Taratasim-pitiavana Ho An’i Bassel Khartabil, ilay Syriana-Palestiniana Voafonja · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-pitiavana Ho An'i Bassel Khartabil, ilay Syriana-Palestiniana Voafonja
Voadika ny 24 Febroary 2015 4:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, বাংলা, Français, Italiano, عربي, македонски, فارسی, Español
Bassel Safadi sy Noura vadiny. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Noura Ghazi Safadi.
*Ny ampahany amin'ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny mpanoratra, Leila Nachawati, ary nadikan'i Diana Navarrete.
Manamarika ny fahatelo taona nitànana azy am-ponja ao Damaskaosy ny 15 Martsa ho an'i Bassel Khartabil—fantatra koa amin'ny hoe Bassel Safadi—bilaogera Syriana-Palestiniana fanta-bahoaka ary mpamokatra rindrambaiko mampiasa ny loharanony misokatra. Mpitarika ny Creative Commons ao Syria ary mavitrika amin'ireo tetikasa toy ny Mozilla Firefox sy Wikipedia, izy no nanokatra ny Aterineto Siriana sy ny fanitàrana ny fahafahana miditra aterineto ary ny fahalalàna ho an'ny daholobe. Araka ny voalazan'ny Parlemanta Eoropeana, ny fihazonana azy dia tafiditra ao anatin'ny ezaky ny governemanta Siriana hanisy teritery ny fidirana amin'ireo vondrom-piarahamonina ety anaty aterineto sy hanampenam-bava ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'io firenena io.
Andro roa nialoha ny fampakarambadiny no nosamborina i Bassel. Nisafidy ny Andron'ny Mpifankatia, ny 14 Febroary i Noura vadiny, mba hamoahana ity taratasy ity ho hitan'ny daholobe:
Tsy vitako ny manoratra tononkalo ho an'ny Andron'ny Mpifankatia, tena tsy maintsy mahita anao aho, ilaiko ny mangalatra ny teny avy eny amin'ny masonao, ireo masonao monja izao no mba azoko eritreretina.
Ary rehefa miatrika tokoa ireo masonao aho, tsy mahita holazaina, tsy afaka misaina na inona na inona, misaina an'i Syria aho, kay ry Bassel. Maharary izy izany, mahonena i Syria.
Syria isak'izay manonona ny anarany aho dia mitomany
ho an'i Syria ny fitiavako manontolo
Antenaiko ho haintsika ny fomba hitiavana azy io, raha tiantsika izy tsy ho tonga tamin'izao misy antsika izao isika…
Heveriko fa samy tia azy daholo isika saingy tsy haintsika ny fomba hitiavantsika azy,
Tsy nianarantsika akory aza ny fomba hitiavana ilay Syria-ntsika
Bassel, tena matahotra mafy aho, matahotra ny momba ny firenena izay norasarasaina, nozarazaraina, natao nivoa-drà, noravàna..
Kay ry Bassel, tena matahotra aho hoe hiova ny nofinofintsika, hiala amin'ny fahitantsika ny tenantsika ho andian-taranaka nanafaka ny fireneny ho lasa andian-taranaka vavolombelon'ny faharavàny. Kay! Bassel, tena matahotra aho …
Te-hanolotra raozy iray aho
tsy mena toy ny rà
tsy fotsy tahàka ny loko izay tsy mba nentiko akory tamin'ny andron'ny fampakarambadintsika
te-hanolotra raozy manga azo, dia ilay loko nentiko fony isika nivady,
ary ny lokon'ny zipoko nanaovako fony aho nanaiky rehefa niteny tamiko ianao hoe tia ahy
Kay! Bassel, ananan'ity firenena ity trosa betsaka isika
amin'ny fotoana rehetra dia reraka aho
amin'ny fotoana rehetra dia osa aho
amin'ny fotoana rehetra dia mitomany aho
Mahatsiaro ho tia tena ary tsy misaina afa-tsy ny tenako irery aho eto Syria
Mahatsiaro te-handao azy ity ary hiala, dia avy eo hiverina indray ary hampanantena fa hatanjaka ilay Syria-ko
Te-hiteny aho hoe tsara tarehy
te-hitoetra ho olombelona
te-hametraka ny anarany ho toy ny tombokavatsa ao amin'ny tànako
mendrika an'izany ilay Syria-ko ry Bassel malalako
ndeha ho andramantsika amin'ity indray mandeha ity ho an'i Syria
ho an'i Palestina
ilay Palestina iainako ao aminao
ianao no Palestiniana sila-panahy lalaiko
alaivo sary an-tsaina
fa malahelo ny tenako ao anatinao ihany aho
malahelo ny zavatra rehetra ao aminao
malahelo an'ilay Syria sy Palestina ao anatinao
Ny 15 Martsa, andro nisamborana an'i Bassel, ihany koa no andro ankalazàna ny nanombohan'ilay fitroaram-bahoaka nalaza tao Syria. Tamin'ny lohataonan'ny 2011, rehefa nidina an'arabe ireo vahoaka avy amin'ny faritra samihafa hitaky ny fahalalahana, ny maha-olona sy ny rariny, tahàka ny hoe azo notanterahana ny zavatra rehetra. Taona efatra aty aoriana, lasa nofy ratsy ny nofinofin'i Bassel sy Noura, ary ny an'ireo hafa marobe. Miaina horohoro tsy mitsahatra i Syria, ka lasa toy ny tsy vaovao intsony ny fangirifirian'ny vahoaka ao aminy.
Vao haingana mihitsy izao no nahafatesana olona maherin'ny 150 ny daroka baomban'ny governemanta, fa tsy hita nivoaka ho lohateny lehibe. Androany, ny habibiana ataon'ny Daesh (ISIS) ihany no mivoaka anaty vaovao, ary dia takalonainy sy iharam-bono ihany koa ny vahoaka Syriana.
Ho antsika rehetra izay mahafantatra sy tia an'i Syria, tena mampangirifiry mafy anay ny zavatra miseho ao amin'io firenena io, ary mbola mafy noho izany aza satria lasa miha-tsy hitan'izao tontolo izao. Tohina noho ireo famonoana olona 200.000 izahay, noho ireo an'aliny maro tànana am-ponja, nafindra toerana, ireo mpialokaloka, ireo izay mitohy miaritra ny fampijaliana tsy takatry ny saina any amin'ny fonjan'ny governemanta, ireo izay miaritra ny didiko fe lehibe ataon'ireo vondrona toy ny ISIS manana ny fandaharanasany sy ny tombontsoany manokana sady fahavalon'ny fahasamihafàna sy harena Siriana. Ireny vahoaka tsy manam-paharoa sy tsy azo soloina ireny, no lasa isa sy antontanisa goavana sisa, izay na ny Firenena Mikambana aza tsy mahavita mandrakitra azy.
Ny tsy firaharahiana no tena mandòna mafy indrindra. Ireo sary izay tsy mahatezitra intsony, ireo fanadihadiana sy tahirin-kevitra momba ny habibiana izay navangongo anaty lahatsary tsy misy mpitsidika. Ny fiaraha-miory feno fanavakavahana atao an'ireo izay sokajiana ho iharan'ny herisetran'ny mpanjakazaka na tsia, ara-drariny na tsia, miainga avy amin'ny toerana ara-jeografika sy politika, ary ataon'ireo izay manampy trotraka ny fanaintainana amin'ny fandàvana ny fanaintainana.
Mampahalelo lavitra noho ny famoizà-malala izany, satria tsy misy fitsaboana antenaina ho an'ny fahaverezan'ny firenena iray. Tsy ho sitrana velively ny ratra. Ho an'ireo izay tia azy, tsy mbola mifarana velively ny hirifiry tsapan'i Syria.
Fanavaozana: Ny 1 Aogositra 2017 no andro nampahafantarana an'i Noura Ghazi fa efa tamin'ny 2015, taona roa lasa izay, i Bassel Khartabil vadiny no najedaky ny fitondràna siriana. Ny Febroary 2015 izy no nanoratra ity taratasy ity, volana sivy talohan'ny nahasairany vaovao tsy voamarina momba ny namonoana an'i Bassel vadiny. Hatramin'izay, na i Noura, na ireo mpanohana an'i Bassel dia samy tsy nisy afaka nanamafy ny fahamarinan'ilay famonoana, ary nandritra ny roa taona farany, niaina tao anatin'ny fanantenana ny mbola hihaona taminy i Noura.
Mbola tsy mivaha ny raharaha lazaina fa nanapahan'ny polisy jamaikana ny dreadlocks ny vehivavy iray
Karaiba 9 ora izay
Hitan'ny kiadin'ny aterineto misy lesoka ny fanafenan-tsoratry ny fampihatra tsy maintsy apetraka amin'ny lalao olaimpika shinoa
Azerbaijan 2 andro izay